SD: In laga war doono heerka xagjirnimo ee muslimiinta reer Sweden - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
La daabacay fredag 27 november 2015 kl 13.30
Halkii ayaannu weli taagannahey
Лидер партии "Демократы Швеции" Foto: TT
Hoggaamiyaha xisbiga ku caan baxay ka hor-tagga soo-galootiga ee marka magaciisa la soo gaabiyo loo yaqaannno SD, Jimmie Åkesson ayaa sheegay in xisbigiisu soo jeedinayo in baaritaan lagu sameeyo hab-dhaqanka muslimiinta dalka ku sugan, si loo ogaado heerka xag-jir-nimadu gaarsii-san tahay. Waana mid uu sheegay inuu ugu dameeyneyo muslimiinta Sweden ku dhaqan ama ey danahoodu ku jiraan.
Wareeysigan ayaa ku beegan iyada oo uu maanta magaalada Lund ka furmi doono kulan sannadeedka wakiillada xisbiga SD, su’aashaasina noqon doonto waybaaha kulanka lagu qaadaa dhigi doono, sida uu sheegay Jimmie Åkesson oo u warramayay war-geeyska maalinlaha ee marka magaciisa la soo gaabiyo loo yaqaanno SvD.
Åkesson ayaa sheegay inuu yahay fal caqli gal ah oo la fahmi karo in ururro xag-jir ah ey isku dayaan iney Sweden soo galaan iyaga oo ku soo dhuumanaya soo-galootiga dalka ku soo qulqulaya.Xisbiguna wuxuu doonayaa in dhammaan la joojiyo soo-galootiga, marka laga reebo kuwa un laga soo qaato xeryaha qaxootiga 4 000 sannadkii.
Jimmie Åkesson ayaa lagu wadaa in dib loogu caleemo saaro kursiga hoggaanka ee xisbiga, isagoona soo dhoweeyay is-bedellada siyaasadeed ee xisbiyada ee marka laga hadleyo siyaasadda soo-galootiga.
In xisbiyada kale ey iminka qaateen siyaasaddii uu ku hamin jiray xisbiga SD ay keeni karto in xibiga Sverigedemokraterna uu siyaasaddiisii soo-galootiga sii adkeeyo ayuu sidan uga jawaabay Jimmie Åkesson:
- Annagu halkii aannu taagneyn ayaannu weli joognaa, hase yeeshee dhabbo dheer ayaa iyaga weli u dhiman sidii ey dhankayaga ugu soo talaabi lahaayeen, gaar ahaan kolka laga hadleyo siyaasadda la xiriirta soo-galootiga.
Marka kuulama muuqato inaad u baahan tihiin fikorro hor leh inaad la timaadaan, sidii aad tartanka halkiisa uga sii wadi lahaydeen?
- Hadda ayaa naloogu kalsoon yahay iyo xaaladda iminka lagu jiro. Waana su’aalihii aannu ka hadli jirney midda iminka la qaatay. Wax nagu cusub howlahaasi annaga nooma ahan, sida uu sheegay.
Isha/ Ekot, SvD